Black Bathroom Foset Na Iche Iche Aka Swivel Spout
Home / Ime ụlọ ịsa ahụ / Aka mmiri ịsa ahụ awara ugboro abụọ / WOWOW Black Bathroom Foset with Iche Iche Swivel Spout
Mgbe ịzụ ahịa na nnukwu igbe mma ụlọ na-ere ahịa, di m hụrụ ndị a fixtures na WOWOW na ha dị ihe dị ka ọkara price nke ndị na-echekwa. N'ịbụ onye cheapskate nke m bụ, enwere m obi ụtọ ịchekwa ego, ọkachasị mgbe nyocha ahụ dị oke mma. Ihe ndozi a bụ ihe atụ nke ị ga-enweta karịa ihe ị kwụrụ. Ihe a haziri mara mma ma nkwakọ ngwaahịa ahụ dị mma - ọ dịka nchekwa nke elu dịka nne na nna na-eme nwata. Naanị ihe na-adịghị mma bụ na otu n'ime njikwa na-emecha nwee ntakịrị ihu ala na ya. Nyere nkwakọ ngwaahịa ahụ niile, ọ bụ ihe ijuanya ịhụ ndị a mana ikekwe QC na-ehi ụra na ọsọ ahụ. Ọfụma na ezughị okè dị n'akụkụ azụ yabụ na ọ nweghị onye ga-ahụ ha belụsọ ma ọ bụrụ na m hulata olu m n'akụkụ na-ekwekọghị n'okike. Anyị enweghị oge iji zipu ntọala ahụ. Igwe mmiri ahụ dị ogologo ma e jiri ya tụnyere ọtụtụ ọkpọka ime ụlọ ịwụ nke dị mma iji jupụta ọkpọka toro ogologo. Anyị ga-akwado ndị ahịa a ngwaahịa a.
Azụrụ m nke a maka ụlọ ịsa ahụ anyị ga-emegharị n'ọdịnihu, yabụ achọghị m itinye nnukwu ego na ya, yabụ kama ịzụta ụdị mma Moen ma ọ bụ Delta dị ka m nwere n'ime ime ụlọ ịwụ ndị ọzọ, azụrụ m nke a otu. Amaghị m na m ga-enweta ọkpọka ka mma maka ọkara ọnụahịa ahụ! Njikọ niile (ma e wezụga ngwa ngwa njikọ ngwa ngwa) bụ ọla. Ọ bụghị anwụ-igba metal ma ọ bụ chrome acha plastic- ọ bụ a metal foset na metal oyiyi akwa na njikọta. Nke a abụghị ikpe na adịchaghị ika faucets na ugboro abụọ na price. Ọdịdị dị mma, imewe ahụ dị mma ma dịkwa mfe ịwụnye, na ngwụcha na-adịgide adịgide ma na-eguzogide ọgwụ. Ọ ghọọla ọkacha mmasị anyị ụlọ mposi na ụlọ. Ejiri ya ma chebe ya nke ọma ma dị ọcha mgbe ọ bịarutere. Naanị ihe na-adịghị mma m nwere ike ikwu bụ ntuziaka nwụnye nwere ike ịmatakwu ma enweghị nkọwa ụfọdụ. Wezụga nke ahụ, nke a bụ n'ezie ezigbo ịzụrụ- mgbe oge ruru iji dochie ihe ndị ọzọ m ga-achọ ga-achọ ndị a kama ịkwụ ụgwọ maka nnukwu ụdị aha. Ukwuu na-atụ aro.
Zuru oke! M na wụnye ihe ọ bụla dị ka nke a n'ihu, na m n'aka na ọ were m obere oge n'ihi na ọ bụ oge mbụ m mere ya- ma n'ezie na ọ bụghị kwa ike na-eme site onwe m! Ihe kacha sie ike iwepụ ihe ochie ahụ. Na ezigbo obi ụtọ, m gbanwere ọkpọkọ ime ụlọ ịwụ 3 na ndị a. Ọ dị mfe ịwụnye ma ọ bụrụ na oghere gị bụ oke nha, nke m abụghị. Echere m na ha niile bụ otu. Ozugbo m gbapuru oghere m, enweghị m nsogbu. Ha na-anọdụ ala karịa igwe dị elu nke na-enye ọdịdị nke nnukwu nsị. Ha anaghị agbatị karịa ndị m nwere.
Anyị zụtara ihe efu ọhụrụ nke jiri pipụ "n'efu", ọ dị ọnụ ala yabụ anyị kpebiri ịzụta ihe kama. Anyị gara na nnukwu igbe ụlọ mma na-echekwa na ihe niile bụ kwa oge a na-achọ m uto na gburugburu $ 150. Anyị kpebiri ịlele na ntanetị wee chọta nke a maka ọkara ọkara ihe anyị gaara akwụ. Ọ mara mma nke ukwuu na tebụl zinc anyị ma nwee mmetụta siri ike.
Ihe ndị a bụ ezigbo pọmpụ m wetara. Anyị na-emegharịrị, azụrụ m ndị ọzọ bụ "aha ụdị" mana ọ bụrụ na m nwetara ihe ndị a niile. Ha chere banyere ihe niile! Ngwaahịa dị elu. Zụrụ ihe ndị a na ị gaghị akwa ụta.